May 27, 2022 May 27, 2022 Impempe.com
OkaDonga Gumbi Cishe sekufanele ivele ikhohlwe wukubuyela emidlalweni yeCaf i-Orlando Pirates kulandela ukubambana kwayo neRoyal AM ngo 2-2 emdlalweni weDStv Premiership eChatsworth Stadium ngoLwesihlanu kusihlwa. Lo mphumela usho ukuthi iPirates sekumele ishaye iSuperSport United ngo […]
May 27, 2022 Impempe.com
OkaDonga Gumbi UKaizer Motaung ubengekho ngesikhathi iKaizer Chiefs yethula ngokusemthethweni u-Arthur Zwane njengomqeqeshi wayo ngoLwesine ekuseni kodwa indodana yakhe uKaizer Junior seyichazile ukuthi kungani. Ngokujwayelekile uMotaung uba khona uma kwenziwa izimemezelo ezinkulu zeqembu kodwa kulokhu […]
OkaDonga Gumbi UMxolisi Macuphu uthi njengoba nabo beyiRoyal AM bezibhekile nje ekutheni bangene kwiCaf Champions League ngesizini ezayo kuzomele bayivalele ngaphandle i-Orlando Pirates. IPirates ikulambele kakhulu ukubuyela emidlalweni yeCaf njengoba kwale kancane inqobe iConfederation Cup […]
OkaDonga Gumbi Isimo asisihle ekhempini yeMamelodi Sundowns kulandela ukuhilizisana kubaqeqeshi bayo. ISundowns inomdlalo obalulekile wamanqamu kwiNedbank Cup ngoMgqibelo. Impempe seyithole ngomthombo wayo othembekile ukuthi abaqeqeshi oManqoba Mngqithi noRulani Mokwena babe baphakamiselana amazwi waze waduba waphuma […]
May 26, 2022 Impempe.com
Sibongiseni Gumbi Igama lesibili lomqeqeshi omusha weKaizer Chiefs, u-Arthu Zwane, nguJabulani futhi uthi yilokho aazalelwa ukukwenza eqenjini. UZwane wethulwe ngokusemthethweni njengomqeqeshi okunguyena ozohola leli qembu elesekwa kakhulu eNingizimu Afrika kule minyaka emithathu ezayo. Uzosizwa umuntu […]